1. Ny faran’ny volana mey lasa teo no namoaka ny fitsarana frantsay fa nonina tao Frantsa i Johnny Hallyday nanomboka ny taona 2017 ka hatramin’ny daty nahafatesany.
Nandalo fotoan-tsarotra i Britney Spears, Stromae,…
Tsy vitsy ireo olona mandalo ilay vanim-potoana antsoina hoe « burn –out ». Reraka tanteraka izy ireo, na eo amin’ny sehatry ny asa na eo amin’ny fiainany manokana ary matetika mitarika fahasimban-tsaina ho azy ireo izany ka zary
Kate, Demi Moore, JLo…Reny tahaka ny ahoana ?
Matetika no mizara ny fitondrany vohoka any anaty tambazotra sosialy ireo vehivavy malaza. Fa mba manitikitika ny mahafantatra hoe :
1. Isan’ireo tena mankafy manombana ireo izay mendrika indrindra ny britanika.
Vao haingana izao no namoaka ireo mpanao hatsikana tena « sexy » indrindra ho an’ny taona 2019 izy ireo.
1. Nandalo sedra i Shakira tany amin’ny taona 2017 tany.
Nandeha rà be ny « cordes vocales »-ny ka tsy maintsy nitsahatra aloha izy teo amin’ny sehatry ny hira.
Tselonina : Niala toaka!
Nampametra-panontaniana ny maro ny fanambarana navoankan’ilay mpanakanto Tselonina Ramanantselonina, ny 9 novambra lasa teo tao anaty tambazotra sosialy « Facebook ».
1. Efa hain’i Matt Pokora mihitsy ny manintona ny mason’ireo mpankafy hijery azy sy manao izay hampiavaka ny tenany amin’ireo mpanakanto hafa.
Nandray ny mari-pankasitrahana faha-13 amin’ny maha- mpanakanto azy izy ny 9 novambra lasa teo ka voasoritra ho artista miteny frantsay ho an’ny taona 2019
Noho izany, dia ny fitsarana frantsay no miandraikitra ny raharaha rehetra mahakasika ny fanambaram-pananana izay napetrak’ity mpihira ity, mialohan’ny nahafatesany.
Izay, raha tsiahivina dia nampisy olana teo amin’i Laeticia Hallyday sy David ary Laura zanak’ity mpihira ity. Nolavin’i Laeticia Hallyday indray ity didy navoakan’ny fitsarana frantsay ity ka nampiakatra ny raharaha izy. Maniry ny hamaha ity resaka lova ity any Etazonia mantsy ity vadin’i Johnny Hallyday ity.
2. Noroahina avy tao Iran i Joss Stone, araka ny filazany. Manatanteraka fitetezam-pirenena mantsy izy amin’izao fotoana, ary efa nandalo teto Madagasikara. Tao Kish no faritra faha-200 saika hamaranany io fitetezam-pirenena, natombony 5 taona lasa io saingy nosakanana teo amin’ny seranam-piaramanidina izy no sady nasaina niverina. Noheverin’ireo tompon’andraikitra hanolotra seho ankalamanjana mantsy ity mpihira ity. Efa hatramin’ny taona 1979 nefa no voarara ny fanaovana fampisehoana an-kalamanjana ao Iran, raha vao vehivavy iray ihany no mihira eo.